E-News Nepali || Fast and Accuracy » श्रीमतीलाई त्रिशुली नदीमा ख’सालेर श्रीमानले गरे ड’र ला ग्दो ह’त्या ! मृ’तक सञ्जुकी दिदीले खोलिन
श्रीमतीलाई त्रिशुली नदीमा ख’सालेर श्रीमानले गरे ड’र ला ग्दो ह’त्या ! मृ’तक सञ्जुकी दिदीले खोलिन
६ महिनाअघि मात्रै विवाह गरेको केही समय नबित्दै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा नवविवाहित युवती मृ’त भेटिएकी छिन् । विदुर नगरपालिका वडा नं.१ ढुंगे बजार २१ वर्षीय सञ्जु खातीले बुधवार राति त्रिशुलीमा हा’म फा’लेकी थिईन् । युवतीको निधन भएपछि प्रहरीले सोही स्थानमा अचेत अवस्थामा फेला परेका उनका पतिलाई प’क्राउ गरेको छ । विदुर नगरपालिका ढुंगेबजारस्थित खोलासँगै जोडिएको एक चार तले घरको बरन्डाबाट त्रिशुलीमा हा’म फा’लेकी सञ्जुको नदीसँगको बगरमा ब’जारिएर निधन भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
बगरमा मृ:त अवस्थामा फेला परेकी उनलाई जिल्ला अस्पताल त्रिशुली पु¥याइएको थियो तर चिकित्सकहरुले उनलाई मृ:त घोषित गरेका थिए । उनका पति २२ वर्षका मौसम खाती पनि बेहोस अवस्थामा फेला परेका थिए । उनको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । नुवाकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार बुधवार राति १० बजेतिर स्थानीयले घ’टनाबारे प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
सञ्जु र मौसमबीचको सम्बन्ध भने त्यति राम्रो नचलेको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरुबीच विवाद भइरहने गरेको र बुधवारपनि दुई जनाबीच विवाद भएपछि घ’टना घ’टेको हुनसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । मौसमले चुरोट खाएको निहुँमा आमासँग मनमुटाव हुँदा सञ्जुले आ’त्मह’त्या गरेको घरका अन्य सदस्यले बताएका छन् तर सञ्जुका माइती पक्षले आफ्नो छोरीले दे’ह’त्याग गरेको नभई उनको ह’त्या भएको दावी गरेका छन् ।
स्थानियका अनुसार पनि उनको ह’त्या नै भएको हुनसक्ने जिकिर गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुखका अनुसार चारतला माथिबाट हा म फा ल्दा बगरमा ठो’किएर मृ’त्यु भएको देखिएको र घ’टना बारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । घ’ट नाबारे थप जानकारी र अध्ययनका लागि महिलाको श:व पो’स्ट मा’र्टमका लागि पठाइएको जनाईएको छ। घ’टना बारे बिस्तृतमा तलको भिडियोमा हेर्नुस् :
प्रकाशित मिति २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १३:२१